The7Habits of Highly Effective People • Dream Lab
4.2 out of5stars (based on 91 reviews)
Subscribe for More Book
ကျွန်တော်တို့တွေ အကုန်လုံး ကမ္ဘာကြီးကို သူရဲ့ အရှိအတိုင်း မမြင်နိုင်ကြပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အကုန်လုံးမှာ ကိုယ်ပိုင်ရှုထောင့် ကိုယ်ပိုင်အမြင်တွေ ရှိကြပါတယ်။
လူနှစ်ယောက်က ရုပ်ရှင်တစ်ကားထဲကို အတူတူကြည့်ပေမယ့် သူတို့တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ရုပ်ရှင်အပေါ် အမြင်ကတော့ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ချင်းစီက ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံတွေ၊ ကိုယ်စီ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့သာ နေထိုင်တတ်ကြပါတယ်။
That is right. Different people different thinking. Thanks for your opinion. Anyway good to read.
Aye Thinza Soe
It is good all the peopel... but don't know how can i download this book...
PrevPreviousBe Obsessed Or Be Average
ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ကမ္ဘာကြီးကို သူရှိနေတဲ့ အရှိအတိုင်း မမြင်နိုင်ကြပါဘူး။ ဘလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အကုန်လုံးမှာ ကိုယ်ပိုင်ရှုထောင့် ကိုယ်ပိုင်အမြင်တွေ ရှိကြလို့ပါ။
လူနှစ်ယောက်ဟာ ကြည့်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားချင်းတူနေရင်တောင် သူတို့တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ရုပ်ရှင်အပေါ် သရုပ်ဖော်တဲ့အမြင်ကတော့ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းရင်းက ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ချင်းစီဟာ ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံတွေ၊ ကိုယ်စီ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့သာ နေထိုင်တတ်ကြပါတယ်။
လူတော်တော်များများဟာ တော်ရုံတန်ရုံ ဘားမှသိပ်မစဉ်းစားမိပဲ ကိုယ်တိုင်လုပ်နေကျ အကျင့်အတိုင်း နေ့ရက်တွေကို ဖြတ်သန်းတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့ အလုပ်တိုင်း ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ဖို့ဆိုရင် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အလေ့အကျင့် (၇) ခုကို ကိုယ်နေ့စဉ်လုပ်နေကျ အကျင့်တွေလိုပဲ လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါတယ်။
Habit 1: ကိုယ်လုပ်ကိုင်လိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်တိုင်းအတွက် တာဝန်ယူမှု ရှိရပါမယ်။ (Be Proactive.)
အောင်မြင်တဲ့ သူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ရပ်တိုင်းအတွက် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု ရှိကြပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒါဟာ ငါ ရွေးချယ်လုပ်ကိုင်ထားတဲ့ အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ဒီအတွက်ကြောင့် ဒီအလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ၊ ကျရှုံးမှုတွေအားလုံးဟာ ငါနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ အတွေးမျိုး ရှိပါတယ်။
ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုတာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု ရှိစေဖို့အတွက် ကိုယ့်နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ အရာတွေ၊ အလုပ်တွေအားလုံးဟာ “သက်ဆိုင်မှုစက်ဝိုင်း (the circle of concern)” ထဲမှာ ရှိနေတယ်လို့ သဘောထားရပါမယ်။
အလုပ်က ပြဿနာတွေ၊ ကျန်းမာရေး ကိစ္စတွေ၊ ငွေရေးကြေးရေးတွေ၊ အကုန်လုံးကို ဒီစက်ဝိုင်းထဲ ထည့်ထားရပါမယ်။ ပြီးရင် ဒီထဲက အကြောင်းအရာတွေကို ကိုယ် ထိန်းချုပ်လို့ ရနိုင်တဲ့ အရာတွေနဲ့ ထိန်းချုပ်လို့ မရနိုင်တဲ့အရာတွေဆိုပြီး ပြန်ခွဲခြားရပါမယ်။
ပြီးရင် (Circle of Concern) ထဲမှာမှ လွမ်းမိုးမှု စက်ဝန်း (Circle of Influence)ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကိုယ်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေကို ကိုယ်က နောက်ထပ် လွမ်းမိုးမှု စက်ဝန်း (Circle of Influence)” ထဲ ထည့်ပြီး ဒီအရာတွေအတွက် တာဝန်ယူမှု ရှိရှိနဲ့ တာဝန်ခံပြီး လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။
ဘာကိုမှ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် မလုပ်နိုင်ကြတဲ့သူတွေမှာ သက်ဆိုင်မှုမှုစက်ဝန်း (Circle of Concern)အကြီးကြီး ရှိနေတတ်ပါတယ်။ သူတို့တွေက သူတို့ မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေကိုပဲ အဆိုးမြင် အတွေးတွေ ထိုင်တွေးရင်း သူတို့ရဲ့ အချိန်တွေကို အလကား ကုန်ဆုံးလေ့ ရှိကြပါတယ်။
Habit 2: အဆုံးကိုတွေးပြီး စတင်ခြင်း (Begin With the End in Mind.)
ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်က အရာဝတ္ထု ပစ္စည်းအားလုံးကို ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် အဆင့်တွေ လိုပါတယ်။ ဥပမာ အိမ်တစ်လုံး တည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအိမ်ကို ဘယ်လိုဒီဇိုင်းမျိုး ဆောက်မယ်၊ ဘယ်လို ပစ္စည်းတွေနဲ့ တည်ဆောက်မယ် စတဲ့ အခြေခံ ဒီဇိုင်းတွေ၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်တွေကို တွက်ချက်ပြီးမှသာ တည်ဆောက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဝတွေကိုလည်း ဒီလိုပဲ ဖန်တီးပုံဖော်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့် ရွေးချယ်လုပ်ကိုင်လိုက်တဲ့ အလုပ်က ကြုံရာကျပန်း ကောက်ရွေးလိုက်သလို ဖြစ်နေလို့ မရပါဘူး။
ကိုယ့်ဘက်က ဖြစ်နိုင်လား၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ အခက်အခဲတွေနဲ့ တွေ့လာရင်ရော ဘယ်လို ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းကြမလဲ ဆိုပြီး ကိုယ့်ဘက်က ကြိုတင် ဒီဇိုင်းဆွဲ စီစဉ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Habit 3: ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်တွေကို အကောင်းဆုံး စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တွေကို အရင်ဆုံး ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ပါ။ (Put First Things First.)
ဒီနေရာမှာ Habit 1 နဲ့ Habit2က ခေါင်းဆောင်မှု Leadership အတွက် လုပ်ဆောင်ရမယ့် အကျင့်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Habit 1 က ကိုယ့်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက် တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှု ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းဖြစ်ပြီး Habit2ကတော့ ကိုယ် လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ဘယ်လို ဖန်တီးပုံဖော်မလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု Habit3ကတော့ စီမံခန့်ခွဲမှု Management အတွက် လုပ်ဆောင်ရမယ့် အကျင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်တွေကို စီမံခန့်ခွဲပြီး အရေးအကြီးဆုံးအလုပ်တွေကို အရင်ဆုံး ပြီးဆုံးအောင် လုပ်ရပါမယ်။ အောင်မြင်တဲ့သူအများစုဟာ သူတို့ရဲ့ အချိန်တွေကို အကောင်းဆုံး စီမံခန့်ခွဲနိုင်ကြပြီး တစ်နေ့တာလုံးမှာ ကိုယ် လုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်ပေါင်း မြောက်မြားစွာထဲကမှ တကယ်အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တွေကို ရွေးချယ် လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း ရှိကြပါတယ်။ ဘယ်အလုပ်တွေကို အဓိက အာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကို သိကြပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေနဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းတွေကို အသုံးချတတ်ခြင်းက Habit3ရဲ့ အဓိက သော့ချက် ဖြစ်ပါတယ်။
အခုပြောခဲ့တဲ့ အကျင့်စရိုက်သုံးခုက မှီခိုနေရတဲ့လူ အဖြစ်ကနေပြီးတော့ အမှီအခိုကင်းတဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်လောက်အောင် ကြိုးပမ်းရတဲ့ Private Development Habit ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ပြောပြမယ့် အကျင့်စရိုက် သုံးခုကတော့ အမှီအခိုကင်းတဲ့ လူတစ်ယောက် ပိုမို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်လာတဲ့ အကျင့်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Habit 4: Win/Win အခြေအနေကိုသာ အတတ်နိုင်ဆုံး ပြောဆို လုပ်ကိုင်ပါ။ (Think Win/Win)
ဒီအဆင့်မှာ ကိုယ်က ခေါင်းဆောင်နေရာကို ရောက်ရှိသွားပါပြီ။ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ရာထူးက ဘာဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး။ အဓိကက ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ် ရှိဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကိုယ်က တခြားသူတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါ ပြုမူဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ အဓိက အတွေးအခေါ် (၆) ခု (six main philosophies of interaction) ရှိပါတယ်။
Win/Win – နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံး အကျိုးအမြတ်ရရှိတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။
Win/Lose – ကိုယ်ဘက်က အကျိုးအမြတ်ရရှိပြီး တစ်ဖက်သား ဆုံးရှုံးရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
Lose/Win – ကိုယ့်ဘက်က ဆုံးရှုံးပြီး တခြားသူကို အကျိုးအမြတ်ရရှိတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။
Lose/Lose – ဘယ်သူမှ ထိပ်ဆုံးကို ရောက်မလာနိုင်ဘဲ အနှောင့်အယှက်တစ်ခုကြောင့် နှစ်ဖက်စလုံး ဆုံးရှုံးရတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။
Win – ဒါက တဖက်သားကို လုံးဝဆုံးရှုံးစေချင်တဲ့ အနေအထားဖြစ်ပြီး တခြားသူ ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကို လုံးဝ ထည့်တွက်မစဉ်းစားတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။
Win/Win or No Deal – နှစ်ဦး နှစ်ဖက် ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အဖြေတစ်ခု မရမချင်း သဘောတူညီချက် မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့အတွက် ဆိုရင်တော့ လူအများနဲ့ ပြောဆိုလုပ်ကိုင်တဲ့ နေရာမှာ Win/Win အခြေအနေကိုသာ အတတ်နိုင်ဆုံး ပြောဆို လုပ်ကိုင်သင့်ပါတယ်။ ဒီလို Win/Win အခြေအနေ ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုရင် အောက်ပါ ရှုထောင့် (၅) ချက်ကနေ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
ပထမတစ်ခုကတော့ မိမိရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်ကိုယ် စရိုက်သဘာဝကိုမှ အောက်ပါ နည်းလမ်း (၃) ခု ရှိပါတယ်။
– ရိုးသားဖြောင့်မှန်မှု (Integrity)
ဒါက ကိုယ်က ဘယ်လိုတန်ဖိုးစံနှုန်းတွေကို တကယ်လေးစားတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့ အချက် ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုရရှိဖို့ဆိုရင် ကိုယ်က ဘာကို တကယ်လိုချင်တာလဲ သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
– ရင့်ကျက်မှု (Maturity)
ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရဲတဲ့ သတ္တိနဲ့ ချင့်ချိန်စဉ်းစားနိုင်စွမ်း ကြားထဲမှာ မျှခြေတစ်ခုကို ရှာနိုင်ရပါမယ်။ ဒီလို စွမ်းရည်နှစ်မျိုးလုံးလည်း ကိုယ့်မှာ ရှိနေရပါမယ်။
– စိတ်သဘောထား ပြည့်ဝမှု့ (Abundance mentality)
Win/Win အခြေအနေမှာ နှစ်ဖက်စလုံး အနိုင်ရဖို့အတွက် ဆိုရင် ကိုယ့်ဘက်ကလည်း စိတ်သဘောထား ပြည့်ဝဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ပါးသူလည်း ကိုယ့်လိုပဲ အကျိုးအမြတ်ရသွားခြင်းဟာ ကိုယ့်ဘက်ကနေလည်း ဘာမှ ပဲ့ပါသွားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး တစ်ခု တည်ဆောက် တတ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
တတိယအချက်ကတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သား လက်ခံနိုင်တဲ့ သဘောတူညီချက်တွေ ထားရှိနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ စတုတ္ထအချက်ကတော့ Win/Win သဘောတူညီချက်တွေက တကယ် Win/Win ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဆိုတာကို သိထားရပါမယ်။ ကိုယ်က Win/Win အခြေအနေကို လိုချင်တာတော့ ဟုတ်ပါရဲ့၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရလာမယ့် အဖြေက တမျိုးတဖုံ ထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ Win/Win ဆိုတာ ဒီလို အခြေအနေမှာ မရှိနိုင်ပါဘူး။
နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ ကိုယ်က Win/Win အခြေအနေကို လိုချင်တယ်ဆိုရင် ဒီလို ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်မယ့် ပြတ်သားမှုတွေ၊ တိကျသေချာမှုတွေ၊ လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်တွေ ရှိနေဖို့ လိုပါတယ်။
Habit 5: ဘယ်အရာတွေကို နားလည်အောင် လုပ်ရမလဲဆိုတာ အရင်ရှာဖွေပါ။ ပြီးမှ နားလည်အောင် လုပ်ပါ။ (Seek First to Understand, Then to Be Understood)
အမှီအခိုကင်းတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရှိသင့်တဲ့ အရည်အချင်းကတော့ တခြားသူ ပြောတဲ့ စကားတွေကို အလေးအနက်ထား နားထောင်ပေးတတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံမှုတစ်ခု၊ နှီးနှောတိုင်ပင်မှု တစ်ခုက ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းအခြေအနေကို အများကြီး ပြောင်းလဲစေပါတယ်။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအနေနဲ့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ပြောဆိုဆက်ဆံရေးတွေမှာ ကျွန်တော်တို့တွေက ဘယ်လို ပြောဆို ဆက်ဆံရရမယ်၊ ဘယ်လို ရေးသား ပြောဆိုရမယ် ဆိုတာကိုပဲ သင်ဖူးကြပါတယ်။ ဘယ်လို နားထောင်ရမလဲဆိုတော့ မသင်ဖူးခဲ့ကြပါဘူး။ နားထောင်တတ်ခြင်းဆိုတာ ထိရောက်တဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်တစ်ခုမှာ အဓိက ကျတဲ့ အချက်တစ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ နားထောင်တယ်ဆိုတာ တခြားသူ ပြောလိုက်တာကို ကိုယ်က ကြားလိုက်တယ် ဆိုတာထက် အများကြီး ပိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေက တခြားတစ်ယောက် ပြောတာကို ကြားလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ ပြောတာကို ကျွန်တော်တို့က ကိုယ့်ရဲ့ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ အမြင်နဲ့ပဲ သုံးသပ်လိုက်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က သူတို့ရဲ့ ပြဿနာကို တကယ် နားမလည်ဘဲ ဖြေရှင်းချက်တွေ၊ အကြံဉာဏ်တွေ သွားပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါက လူနာကို မစစ်ဆေးဘဲ ကုသနည်းတွေကို ကြိုပြောနေတဲ့ ဆရာဝန် တစ်ယောက်လိုပါပဲ။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်တို့က လွှမ်းမိုးပြီး ပြောဆိုမှုတွေ မလုပ်နိုင်ခင် သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို နားလည်နိုင်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ သူတို့ကို အရင်ဆုံး နားလည်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလို နားလည်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တွေဟာ မျှဝေခံစား နားထောင်တတ်ခြင်း နည်းလမ်းဆိုတဲ့ Empathic listening ကို လုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။
မျှဝေခံစား နားထောင်တတ်ခြင်း နည်းလမ်း Empathic listening ဆိုတာက တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကို ပြောလိုက်တဲ့ စကားကို ကိုယ်က အမှန်တကယ် နားလည်လိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ကိုယ်က သူတို့ကို အကြံပေးဖို့အတွက်၊ ဆရာကြီး လုပ်ဖို့အတွက် နားထောင်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ရှုထောင့်ကနေ သူတို့ မြင်သလို ကမ္ဘာကြီးကို မြင်နိုင်ဖို့အတွက် ကြိုးစားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို နားထောင်တတ်ခြင်းမျိုးက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုတွေ တည်ဆောက်တဲ့ နေရာမှာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ယုံကြည်မှုတစ်ခုကို တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ တခြားသူမှာလည်း ကိုယ့်လိုပဲ တူညီတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မှားပြီး ယူဆတတ်ကြပါတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ ကိုယ် ထင်ထားသလို မဖြစ်လာပါဘူး။ ဒီတော့ သူတို့ကို နားလည်အောင် ကြိုးစားချင်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒက အရေးကြီးပါတယ်။
အလေးအနက်ထား နားမထောင်တတ်ဘူးဆိုရင် သူတို့ ပြောတဲ့ စကားတွေကို ကိုယ်က အောက်ပါ နည်းလမ်း (၄) ခု အတိုင်း ပြန်တုံ့ပြန်တတ်ပါတယ်။
– ကိုယ်က သူတို့ပြောတာတွေကို သဘောတူတယ်၊ သဘောမတူဘူး ဆိုပြီး ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ် တန်ဖိုး သွားဖြတ်တတ်ပါတယ်။
– ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်၊ အတွေးတွေပေါ်မှာ အခြေခံပြီး သူတို့ ပြောတာတွေကို ပြန်လှန် မေးခွန်းထုတ်တတ်ပါတယ်။
– ကိုယ်သိထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံကို အခြေခံပြီး သူတို့ကို အကြံဉာဏ်တွေ သွားပေးမိတတ်ပါတယ်။
– သူတို့ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခြေအနေတွေကို ကိုယ် တွေ့ကြုံရတဲ့ အခြေအနေလို့ ထင်ပြီး ကိုယ်က ဝင်နှောက်ယှက်မိတတ်ပါတယ်။
ဒီလို တုန့်ပြန်ချက်တွေက ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် သတိမထားမိလိုက်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အကျင့်တွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီလို အကျင့်တွေနဲ့ တုန့်ပြန် ပြောဆိုတာတွေက ကျွန်တော်တို့ကို တခြားသူက တကယ် ဘယ်လို ခံစားနေရတာလဲ၊ ဘာကို ပြောချင်တာလဲ စတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို အမှန်တကယ် နားလည်နိုင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် ခဲယဉ်းသွားပါတော့တယ်။
မျှဝေခံစား နားထောင်တတ်ခြင်းဆိုတာ သူတို့ ပြောတာတွေကို ကြားလိုက်ရုံနဲ့လည်း မရပါဘူး။ သူတို့ ဘယ်လို ပြောဆိုနေတယ် (ဥပမာ စိတ်လိုက်မာန်ပါ ပြောဆိုနေလား၊ စိတ်ပျက် လက်ပျက် ပြောဆိုနေလား စတဲ့) သူတို့ရဲ့ body language ကိုလည်း အာရုံစိုက်ပြီး ကိုယ်က နားထောင်ပေးတတ်ရပါမယ်။
တခြားတစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို ဘာပြောချင်တာလဲ ဆိုတာကို ကိုယ်က အမှန်တကယ် နားလည် နိုင်ပြီဆိုရင် အခု Habit5ရဲ့ ဒုတိယ အဆင့်ကို ဆက်သွားလို့ ရပါပြီ။ သူတို့ကို ကိုယ်က နားလည်အောင် လုပ်ရပါတော့မယ်။
Habit 6: တခြားသူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တတ်အောင် ကြိုးပမ်းပါ။ (Synergize)
လုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုကို တစ်ယောက်တည်း စဉ်းစားလုပ်ဆောင်တာထက်စာရင် လူအများကြီး ပူးပေါင်းစဉ်းစားလုပ်ဆောင်တာက ပိုမို ထိရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းတာ၊ အစီအစဉ်ရေးဆွဲတာ၊ တစ်စုံတစ်ခုကို ဖန်တီးပုံဖော်တာ စတာတွေကို တစ်ယောက်ချင်းစီ လုပ်ဆောင်နေတာထက်စာရင် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာက ပိုအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး Synergistic communication မျိုးဆိုတဲ့ နေရာမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆံပြီး အိုင်ဒီယာအသစ်တွေကို အချင်းချင်း မျှဝေပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာက ပိုကောင်းတဲ့ အိုင်ဒီယာအသစ်တွေ ရလာမယ်လို့လည်း အကုန်လုံးက ယုံကြည်နေဖို့ လိုပါတယ်။
အချင်းချင်း ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြင့်မားနေတဲ့အချိန်မှာ ထွက်လာတဲ့ ရလဒ်ကလည်း ကြီးမားပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန်အလှန် နားလည်မှုတွေ ကြီးထွားလာပြီး အတွေ့အကြုံတွေကို အပြန်အလှန် မျှဝေနေကြတဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေက တကယ် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ ပိုမို အဆင်ပြေ ချောမွေ့မှု ရှိလာစေပါတယ်။
ဒီလို ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာ အချင်းချင်း မတူကွဲပြားတဲ့ စွမ်းရည်တွေကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းရဲ့ အဓိက အချက် ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ရဲ့ အားသာချက်တွေကို တစ်ယောက်က နားလည်တာ၊ အားနည်းချက်တွေကို အတူတူ ဖြေရှင်းတာ စတာတွေက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမှာ မဖြစ်မနေ ပါဝင်ရမယ့် အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Habit 7: ကိုယ့်ရဲ့ လွှကို သွေးနေပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အမြဲထက်မြက်နေအောင် လုပ်ပါ။ (Sharpen the Saw _Principles of Balanced Self-Renewal)
သစ်ခုတ်သမားတစ်ယောက်က တောထဲမှာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ထင်းခုတ်ဖို့အတွက် သွားရတယ် ဆိုပါစို့။ တစ်နေ့လုံး အသက်ထွက်လောက်အောင် သူ့မှာ ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ အလုပ် လုပ်ကိုင်ရပါတယ်။ သူ ထင်းခုတ်သွားတာကို ဘေးက မြင်တဲ့သူတွေက ဝိုင်းပြီးပြောကြတယ်။ သူ့ရဲ့ လွှကိုသာ သွေးထားခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ အလုပ်တွေကလည်း ဒီထက် ပိုလွယ်မယ်ပေါ့။ ခက်ခက်ခဲခဲ လုပ်နေစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် သစ်ခုတ်သမားက သူ့မှာ တစ်နေ့လုံး လွှဆွဲပြီး အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ အတွက်ကြောင့် လွှကို သွေးဖို့အချိန် မရှိဘူးလို့ ပြန်ဖြေပါတယ်။
အောင်မြင်ဖို့အတွက် အဓိကကျတဲ့ နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ လွှကို အချိန်ယူပြီး သွေးဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို နဂိုရှိနေတာထက် ပိုထက်မြက်သွားအောင် လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ အရှေ့မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အချက် (၆) ချက်ကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် အသစ်ဖြစ်လာအောင် ပြုလုပ်ဖို့အတွက် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ်က ကိုယ့်ကံကြမ္မာရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် ဖြစ်နေပါပြီ။ ကိုယ်ကသာ ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ဆက်လက်ပြီး ထက်မြက်အောင် မလုပ်ဘူးဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ စွမ်းအားတွေကလည်း တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အစွမ်းအစတွေ ကောင်းနေမှသာ၊ ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေက ထက်မြက်နေမှသာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရော၊ တခြားသူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ အလုပ်လုပ်ကိုင်တဲ့နေရာမှာရော ထိရောက်စွာ ပြောဆို လုပ်ကိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြောင်းလဲနေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကို ကျမသွားအောင် ထိန်းထားပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အသစ်ဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အဓိကကျတဲ့ ရှုထောင့်ကြီး (၄) ခု four core dimensions ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ –
– ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့် (Physical dimension)
– ယုံကြည်သက်ဝင်မှု ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှုထောင့် (Spiritual dimension)
– စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှုထောင့် (Mental dimension)
– လူမှုရေးဆိုင်ရာ/စိတ်ခံစားချက်ဆိုင်ရာ ရှုထောင့် (Social/Emotional dimension)
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှုထောင့် (Physical dimension) မှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပြီး ကျန်းမာအောင် နေထိုင်စားသောက်တာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တာ၊ ကောင်းကောင်း အနားယူတာ စတဲ့ အချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ရှုထောင့် (Spiritual dimension) ဟာ အလေးထားရမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးတွေအပေါ်မှာ တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ် အရင်က သတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးတွေကို ပြန်လည် တွေးတော ဆင်ခြင်ကြည့်ပြီး တန်ဖိုးအသစ်တွေ သတ်မှတ်တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှုထောင့် (Mental dimension) ကို သန်မာလာဖို့၊ ဖွံ့ဖြိုးလာစေဖို့ အတွက်ဆိုရင်တော့ စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာသင်ယူရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ဖြစ်တဲ့ စာဖတ်ခြင်း၊ စာရေးခြင်းတို့ကနေ တိုးတတ်လာအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အခုပြောခဲ့တဲ့ dimension သုံးခုက အောင်မြင်ဖို့အတွက် ပြုလုပ်သင့်တဲ့ ပထမဆုံး အချက် (၃) ချက်နဲ့လည်း ဆင်တူပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကို နေ့စဉ် ပုံမှန်ကျင့်သုံးသွားမယ်ဆိုရင် ဒါတွေက ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှုတွေဆီကို ဦးတည်သွားစေနေပြီး မလွတ်လပ်တဲ့၊ သူများကို မှီခိုနေရတဲ့ ဘဝကနေ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်တဲ့ ဘဝကို လျှောက်လှမ်းစေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံး dimension တစ်ခုကတော့ လူမှုပေါင်းသင်းရေးဆက်ဆံရေး/စိတ်ခံစားချက် (Social/Emotional dimension) ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက် အခြေအနေတွေက တခြားသူတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေမှာ ပေါ်ထွက်လာလေ့ ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်အခြေအနေတွေကို အားကောင်းအောင် ပြုလုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကျွန်တော်တို့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပုံတွေက ပိုတိုးတတ်လာပါလိမ့်မယ်။ သူလည်း အကျိုးရှိ ကိုယ်လည်း အကျိုးရှိတဲ့ Win/Win အခြေအနေကိုပဲ ဦးတည် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်မှုတွေ ရှာဖွေတာ၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံး လက်ခံနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကို ရှာဖွေတာ စတဲ့ အချက်တွေကို လုပ်ဆောင်ပေးသင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုယ် ကျွန်တော်တို့ အသစ်ဖြစ်အောင် ပြန်လည် ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတတ်အောင် ဆောင်ရွက်နေဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်က ဘယ်တော့မှ အဆုံးရှိတဲ့ ဖြစ်စဉ် မဟုတ်ပါဘူး။ အမြဲတမ်း ဒီအချက်တွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးနေပြီး တာဝန်ယူတတ်တဲ့ စိတ် ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိတဲ့ အချက် (၆) ချက်ကို အကျဉ်းချုပ် ပြန်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ –
Habit 2: အဆုံးကို တွေးရင်း စတင်ပါ (Begin With the End in Mind.)
Habit 3: ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်တွေကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေကို အရင်ဆုံး ပြီးဆုံးအောင် လုပ်ရပါမယ်။ (Put First Things First.)
Habit 5: ဘာကို နားလည်အောင် လုပ်ရမလဲ အရင် ရှာဖွေပါ။ ပြီးမှ နားလည်အောင် လုပ်ပါ။ (Seek First to Understand, Then to Be Understood)
ဒီ The7Habits of Highly Effective People စာအုပ်ကို ရေးသားသူ Stephen R. Covey က Productivity နယ်ပယ်မှာ ထင်ရှားတဲ့ စာရေးဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်ပြီးတော့ motivational speaker တစ်ယောက်နဲ့ စီးပွားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို အကြံပေးသူ Business Consultant တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ တခြားထင်ရှားတဲ့ စာအုပ်တွေကတော့ The 8th Habit, First Things First, and Principle-
Centered Leadership တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။